के तपाईंले कहिले याद गर्नुभएको छ ? कपाल र नङ काट्दा किन दुख्दैन ? किन हुनेगर्छ यस्तो ? – List Khabar
Home / रोचक / के तपाईंले कहिले याद गर्नुभएको छ ? कपाल र नङ काट्दा किन दुख्दैन ? किन हुनेगर्छ यस्तो ?
के तपाईंले कहिले याद गर्नुभएको छ ? कपाल र नङ काट्दा किन दुख्दैन ? किन हुनेगर्छ यस्तो ?
admin January 2, 2022 रोचक Leaveacomment 84 Views
तपाईंले याद गर्नुभएको होला, बढेको नङ काट्दा मात्र पीडा नहुने हो तर छालासँग टाँसिएको नङमा चोट लागेमा वा भाँचिएमा पीडा हुन्छ ।पूरै नङ मृत कोशिकाबाट नबनेको बरू बढेका नङ मात्र मृत कोशिकाबाट बनेका हुनाले नदुखेको हो । छालासँग जोडिएका नङ चाहिँ जीवित कोशिकाबाट बनेको हुनाले त्यसमा चोट लाग्दा हामीलाई दुख्छ ।
थप् समाचार :मानिसले लसुनको खेती गर्न थालेको पाँच हजार वर्ष भइसक्यो । मानव स्वास्थ्यका लागि गुणकारी लसुन खाँदा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । लसुनको टुुप्पो एकाबिहानै खाँदा धेरैथरी रोगबाट बच्न सकिन्छ । लसुनका विशेषताको अध्ययन गर्दा यो त गजबको एन्टीबायोटिक हो भन्ने पत्ता लाग्यो । अझ खाली पेट लसुन खाँदा यसले पेटका हानिकारक ब्याक्टेरियालाई मारिदिन्छ ।
ग्यास्ट्रिकको समस्या भएकाले बिहान खाली पेटमा तातो पानीसँग लसुन खादा निकै फाइदा पुग्छ । लसुनका अन्य पनि धेरै फाइदा छन् । तपाईं मुसा तथा फंगल संक्रमणबाट बच्नका लागि छालामा लसुन दल्न सक्नुहुन्छ । छालाका अन्य धेरै रोगबाट लसुनले बचाउँछ ।
लसुन खाँदा रक्तचाप स्थिर हुन्छ । यसले हाइपरटेन्सन पनि घटाउँछ । लसुनले पेनकिलरको पनि काम गर्छ । शरीरको कुनै भाग सुन्निँदा पनि लसुनले फाइदा गर्छ । लसुनले रगत पातलो बनाएर जम्नबाट रोक्छ । लसुन नियमित खाँदा रुघाखोकी लाग्दैन ।स्नायुप्रणालीको गडबडीलाई पनि लसुनले रोक्छ ।
Previous आइतबार कृष्ण औंसी! यस्तो पर्नेछ अबको तपाईको जीवनमा यसको प्रभाव
Next किन दुब्लाए उत्तर कोरीयाली शासक किम जोङ उन? यस्तो रहेछ कारण